Mourinho wuxuu beeniyay wax walba oo la xiriira bixitaanka xidigaan - damqo
Tababaraha Manchester United Jose Mourinho ayaa shaaca ka qaaday inuusan wax walaac ah ka qabin mudada uu maqnaan doono ama waqtiga uu dib usoo laabanayo xidiga ugu qaalisan kooxda Paul Pogba kadib guushii ay ka gaareen Huddersfield Town.
Red Devils ayaa guul ka gaartay Huddersfield Town kulan ka tirsan koobka FA Cup-ka waxeyna kaga mahad celinayaan Romelu Lukaku oo laba gool dhaliyay, sidaas darteed macalinka reer Portugal abuuray sheeko xasaasi ah
Mourinho wuxuu beeniyay wax walba oo la xiriira bixitaanka xidigaan, balse wuxuu ka dhawaajiyay ineysan wax fakar
ah ku heynin arintiisa soo laabashada.
“Waxaan u sheegay subaxdii hore dhaqtarka” ayuu yiri Mourinho ka hor kulanka.
“Ma garanayo, daacadii kama taxadarayo, sababtoo ah waxaan kaliya diirada saarayaa kulanka, kaliya waxaan hadda ogahay inuusanciyaareynin, waxaan Paul ka fakari doonaa kadib kulanka” ayuu mar kale yiri.
Xafiiska Damqo Talyaniga